Madaxda Midowga Yurub oo ansixiyey dalab culus oo ka yimid dowlada Ukraine | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Madaxda Midowga Yurub oo ansixiyey dalab culus oo ka yimid dowlada Ukraine
Madaxda Midowga Yurub oo ansixiyey dalab culus oo ka yimid dowlada Ukraine
Hoggaamiyayaasha Midowga Yurub ayaa yeeshay shir-madaxeed weyn oo lagu ansixiyey dalabka Ukraine ee ah inay ka mid noqoto ururkan, iyadoo kulankan uu ku soo beegmay xilli ay sii kordheyso xiisadda u dhexeysa Yurub iyo Moscow oo uu weli socdo dagaalka Ukraine.
Wasiirka Yurub ee Faransiiska Clement Beaune ayaa sheegay in guud ahaan la isku raacay taageerada codsiga Ukraine, kadib wadahadal dhex maray wakiillada waddamada Midowga Yurub.
Kyiv ayaa aad ugu dadaalaysay sidii ay ugu biiri lahayd ururkan ka kooban 27-ka xubnood sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo qaar ka mid ah wadamada EU-da sida Portugal iyo Danmark ay mar sii horreysay muujiyay inay taageeraan.
“Dadka Ukraine waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan aragtida Yurub” ayay tiri Ursula von der Leyen oo ah madaxa Midowga Yurub.
Previous articleSomalia oo loogu deeqay $143 milyan oo dollar iyo DF oo War ka soo saartay
Next articleCaruur 30 ka badan oo 48 saac gudahood ku dhintay Isbitaalka Kismaayo (Sababta)